YEMAHARA KUSHANDA MARKET - KUKUDZA, KUTENDA, NOKUDZIDZA (2020 - 2025)
Musika wepurasitiki wepurasitiki wakakosheswa pamadhora 345.91 bhiriyoni mu2019 uye unotarisirwa kusvika pamutengo weUS $ 426.47 bhiriyoni na2025, paCAGR ye3,47% panguva yekufungidzira, 2020-2025. Zvichienzaniswa nezvimwe zvigadzirwa zvekuputira, vatengi vakaratidza kuwedzera kuri kuita kwepurasitiki ...Verenga zvimwe »
Packaging Innovations 2019 ongororo: Mapurasitiki kumberi kune fiber-based vanopikisa
Post nguva: Jul-27-2020
9 Sep 2019 - Dhiraivhu yekuwedzera kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza mumapakeji yaive zvakare pamusoro pechirongwa paPacking Innovations muLondon, UK. Yakasarudzika uye yeruzhinji kunetsekana nekukwira kwemafashamu epasi rese kusvibiswa kwakakurudzira mutemo wekuita, nehurumende yeUK yakatemerwa ...Verenga zvimwe »
Chipurasitiki chinhu chinoumbwa nechero yeakasiyana siyana ezvigadzirwa kana semi-synthetic organic makomputa ayo anogona kuumbika uye saka anogona kuumbwa kuita zvinhu zvakaoma. Plasticity ndiyo yakajairwa pfuma yezvinhu zvese izvo zvinogona kuumbika zvisingadzoreke pasina kutyora asi, mukirasi yeyakaumbika polym ...Verenga zvimwe »
2020 epurasitiki Packaging Maitiro
Bishop Beall veChroma Colour vanokurukura maonero avo pane akakosha maitiro ekufunga mukugadzirwa kwepurasitiki yekupakata ichienda kumberi.Vangu vatinoshanda navo neni tanga tichigara tichitaura pamusoro penyaya yekusimudzira uye kuyedza kuri kuitika kune yakatenderedza hupfumi indasitiri yakakura, kusanganisira zvinhu uye kuwedzera .. .Verenga zvimwe »
Kuongororazve kupurasitiki - kuenda kune yakatenderera hupfumi
Kuiswa kwepurasitiki: chinetso chiri kukura Deredza, shandisa zvakare, dzokorodza 9% Yekuputirwa kwepurasitiki pasirese parizvino inogadziriswazve.Miniti yega yega yakaenzana netiraki remarara remarara epurasitiki anodonhedza munzizi nenzizi, zvichizopedzisira zvave mugungwa. Anofungidzirwa kuti mamirioni zana mhuka dzemumvura dzinofa gore rega rega ...Verenga zvimwe »
Maitiro ePurasitiki Yemahara Kufambisa Kunokanganisa Kuisa uye Chigadzirwa Dhizaini
Maitiro ePurasitiki Yemahara YeMagetsi Inokanganisa Kuisa uye Chigadzirwa Dhizaina Kuva uye chigadzirwa dhizaini chakabatana kune vatengiism sekuziva kwedu. Ziva kuti mafambiro epurasitiki-emahara ari kugadzira shanduko mune izvo zvigadzirwa zvinoratidzwa, kugadzirwa, uye kuraswa. Pese paunopinda muchitoro kana kugirosa st ...Verenga zvimwe »
Pfupiso yePurasitiki Kudzokorora
Kugadziriswa kwepurasitiki kunoreva maitiro ekudzosa marara kana zvimedu zvepurasitiki uye kudzokorora zvinhu zvacho muzvinhu zvinoshanda uye zvinobatsira. Ichi chiitiko chinozivikanwa seyeplastiki yekudzokorora maitiro. Chinangwa chekushandisazve plastiki ndechekuderedza huwandu hwakawanda hwekusvibisa kwepurasitiki nekuisa zvishoma p ...Verenga zvimwe »